Midi Madagasikara : Kolikoly avo lenta eto Madagasikara : tsy misy fisamborana ireo be satroka, araky ny voalazan’ny masoivoho amerikana – 28 janoary 2016 - Transparency International - Initiative Madagascar
Nivoaka ny 28 Janoary 2016 ao amin'ny Hetsika, An-gazety,
Manomboka izao ka hatramin’ny taona 2025 dia 50 amin’ny 100 no naoty tokony henjehan’i Madagasikara. Tsy mora ny fanatratrarana io isa io raha tsy misy ny ezaka goavana ataon’ireo mpitondra.
Ny teo aloha ihany no mitohy hoy no sojaben’ny solontena diplomatika, masoivohon’I Maroka Mohammed Amar, izay tsy nisorona mihitsy niteny nandritry ny fifampirarian-tsoa teny Iavoloha tamin’ny firesahany ireo voka-dratsin’ny zava-misy aratsosialy eto amin’ny firenena. Nanaraka azy koa ny Vondrona Eropeana izay nanambara fa tokony hampiharina ireo dingana tokony harahina amin’ny fitantanana mirindra sy ny ady amin’ny kolikoly. Ny fahatelo ary tsy ny kely indrindra dia ny Transparency International,izay nanao fanamarihana tamin’ny alalan’ny Maripandrefesana momba ny kolikoly 2015. Ny famehezana ny vokatra notontosain’ny Transparency International dia nataon’Andriamatoa Frédéric Lesne izay tsy iza fa ny talen’ity fikambanana ity. Ny fandravonana ny vokatra dia natao teny amin’ny American Center Tanjombato omaly.
Maripandrefesana: Ho fanombohana dia nilaza ny tale fa “Ny Maripandrefesana momba ny kolikoly eto Madagascar dia nijanona mampanahy efa ho telo taona izay. Na dia mamerimberina matetika aza ireo mpitondra fanjakàna fa vonona hanatanteraka izay rehetra hahafahana miroso ao anatin’io ady io dia mbola tsy misy fivoarana mihitsy ny resaka kolikoly sy ny sehatry ny fandraharahana hatreto araky ny hevitr’ireo manam-pahaizana eto an-toerana sy ireo avy any ivelany. Ny maripandrefesana momban’ny kolikoly dia manome naoty 0 hatramin’ny 100, aotra ho an’ireo firenena tena hanjakàn’ny kolikoly ary 100 ho an’ireo firenena tena mahitsy. Nametraka fandaharana iraisam-pirenena izy tamin’ny alalan’ireo naoty ireo. Ho an’i Madagasikara manokana , ny isa azony tamin’ny taona 2015 dia 28/100 ary toy izany foana nandritry ny telo taona nifanesy. Tsy fiovana no tsikaritra amin’izany. Amin’ny lafiny fandaharana, teo amin’ny faha 123 amin’ny firenena miisa 168 no nisy an’I Madagasikara. Isa mahakivy satria raha ampitahaina amin’ny mpianatra dia mila tsy hahatratra ny naoty 5 amin’ny 20 akory.
Dikany: Ny masoivohon’I Etazonia eto Madagasikara Robert T. Yamate dia niombon-kevitra tamin’izany : “Ny ady amin’ny kolikoly izay nataon’I Madagasikara dia mitohy”. Ity diplomaty ity ihany koa dia niresaka mahakasika ireo loza manambana ireo harena voajanahary sarobidy izay tsy tokony ho atao ambanin-javatra araka ny fanamafisany. Mahakasika hatrany ny kolikoly dia nanambara ny masoivoho fa “tsy misy mihitsy ny fanatratrarana ireo be satroka”. Ity farany moa izay nanao ny fanamarihana fa “olona iray nosamborina satria voarohirohy tamin’ny raharaha andramena no navotsitra ary nivoaka ny firenena”. Araka izany ny fanafodin’ny kolikoly hoy izy dia ny fangaraharana.
Vokatra tsy mahafapo: Raha hiverenana ny mahakasika ny Maripandrefesana ny kolikoly 2015, ny Transparency International dia manao antso avo “Ny fiadiana amin’ny kolikoly dia mitaky fahasahiana politika goavana, satria miady mivantana amina tombotsoa manokan’olona tena matanjaka… Araka ny fahitana ny vokatra izay tsy mahafapo hita amin’ny ady amin’ny kolikoly hatramin’izao dia zon’ny Malagasy ny hiandry misimisy kokoa avy amin’ireo mpitondra azy ireo”. Na izany aza anefa, dia tsy adinon’I Transparency international ny nanipika fa “mila taridalana sy soridalana mazava raha te hahomby amin’ny ady amin’ny kolikoly. Ny fandaniana ilay tetika nasionaly vaovao mahakasika ny ady amin’ny kolikoly, izay nosahanin’ny filohan’ny Repoblikan’I Madagasikara manokana ny volana septambra lasa teo, dia fitaovana iray entina mifehy ireo asam_panjakana tsy hivaona amin’izany ady izany ao anatin’ny folo taona manaraka”. Ny sisa ho fantarina izao dia hoe hisy tokoa ve ny fanatsaràna ny ady amin’ny kolikoly amin’ny taona ho avy manaraka.
Rohy mankany amin’ny lahatsoratra : http://www.midi-madagasikara.mg/a-la-une/2016/01/28/corruption-de-haut-niveau-a-madagascar-pas-darrestation-de-gros-bonnets-selon-lambassadeur-americain/